Ganacsato iyo Mukhallasiin Siyaasadeed - iftineducation.com
iftineducation.com – Ganacsato waxaa jira mar haddii waxa ay damceen ay helayaan aan dan ka lahayn dadka iyo dalka. Dan aan ka lahayn sida iyo meesha ay ka helayaan heshiiska iyo cidda ay la gelayaan.
Waxaa indho tiray damaca. Iftiinka keliya ee ay wax ku arkaan waa toosh ku shaqeeya bateri magaciisa la yiraahdo .
Wax deeqaa ma jiraan dhimashada ka hor. Maba dareensana meesha ay Soomaaliya mareyso. Ma arkaan inta boos, guri ama dhul weyn oo bannaan ay caasimadda ku leeyihiin iyo weliba Gobollada qaar. Kuma filna oo waxay weli u oon qabaan dhul. Kamana dhergi doonaan baahida dhulka ilaa marka ay toodu gasho markaas oo ay heli doonaan dhulka dhabta ah ee ku filan – kaas oo ah 2 miitir.